DandyLoop: La Wadaag Dukaameystayaasha Internetka Dukaammada Dhexdooda | Martech Zone
DandyLoop: La Wadaag Dukaameystayaasha Internetka Dukaammada Dhexdooda
Sabtida, Diisambar 6, 2014 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Dhaqan aad u caan ah oo ku saabsan dhinacyo badan oo khadka tooska ah ah ayaa ah iskaashiga ka dhexeeya shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya goobtaas, yar ama weyn. Tani waxay aad ugu badan tahay barnaamijyada moobiilka, ciyaaraha khadka tooska ah, fiidyowga, iyo dabcan goobaha waxyaabaha ku jira. Goobaha wax lagu qoro waxaan ku aragnaa isku tashiga ka kooban waxyaabaha ka dhexeeya bogagga, xitaa markay tartamayaan. Way adag tahay in la helo hawlwadeenno aan taageeri doonin dhaqankan. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan tahay biseyl heer sare ah oo ka imanaya shirkadaha goobta jooga - waxay u baahan yihiin inay fahmaan in wadaagistu aysan ahayn wax hal dhinac wax lagu siinayo, ee ay tahay laba dhinac - qof walbaa wuu guuleystaa.
In kasta oo aad nala joogtay tan iyo bilowgii internetka, sanadihii la soo dhaafay oo keliya ayay wershadaha eCommerce bilaabeen inay dimoqraadiyeeyaan. Korodhka aaladaha SaaS waxay awood u siiyeen in bakhaarro badan oo internetka ah la furo, maantana waxaa jira in ka badan 12m oo iyaga ka mid ah. Waxa kaliya ee halkaan ka maqnaa waa dhaqanka iskaashiga: dukaamada wali waxay kuxiran yihiin qorshooyinka suuq geynta qaaliga ah, waxayna raadiyaan habab cusub oo ay kula xiriiraan macaamiisha mustaqbalka - bulshada ayaa ahayd mid, ka dibna waa la qanciyay. Hadda waxay ogaadeen qiimaha wadashaqeynta, hase yeeshee ma haystaan ​​waddo ay ku sameeyaan.
Dhaqanka ugu fiican ee iskaashiga ka dhexeeya dukaamada internetka ayaa ku jira ganacsigooda aasaasiga ah - iibinta alaabada. Marka laba dukaan oo laxiriira ay go aansadaan inay iskaashadaan oo ay iskula taliyaan midba midka kale badeecadiisa, waxaan aragnaa CTR oo ka sareeya waxkasta oo aan ku naqaan suuqgeyn dhaqameedka (in kabadan 7% celcelis ahaan). Tani waa sababta oo ah waxay ka duwan tahay inta badan suuq-geynta dhaqameed - halkan qiimaha dukaanku waa dhab - tani waa waxa isaga / iyadu ay raadiso markuu isagu / iyadu dukaamaysanayo.
DandyLoop waxay awood u siineysaa dhaqanka wadashaqeynta iyadoo la adeegsanayo madal iskaashi oo loogu talagalay dukaamada internetka, halkaas oo dukaan kasta uu ku ogaan karo kuna casuumi karo dukaamada kale inay la wadaagaan, taasoo la micno ah inay si isku mid ah ugu talin doonaan wax soo saarka midba midka kale. Tani waxay u socotaa dhinaca kale sidoo kale - dukaan walba waa la ogaan karaa oo waxaa lagu marti qaadi karaa dadka kale. Waxay maamuli karaan dhaqdhaqaaqa shabakadooda waxayna kormeeri karaan waxqabadka lamaane kasta.
Wadashaqeyntu waxay ku saleysan tahay sinnaan, waana halkaas meesha algorithm-ka lahaanshuhu uu xakameynayo - booqde kasta oo bakhaar uu siiyo mid ka mid ah shuraakadiisa, wuxuu heli doonaa soo booqde cusub. 1 ee 1. Tani waa mid u gaar ah adduunka eCommerce: macaamiisheennu kuma jiraan ganacsiga iibinta taraafikada lacag, waxay ku jiraan ganacsiga iibinta alaabada - waana taas tan aan bixinno - taraafikada badan, booqdayaasha badan, iyo iibsiyo badan.
Xilligan beta loogu talagalay Soo iibso isticmaalayaasha, DandyLoop waxay bixisaa xakameyn buuxda oo ku saabsan alaabooyinka lagugula taliyay, warbixinno hufan iyo deg deg deg deg ah oo fudud!
Tags: dandyloopkobcinta ecommercedukaankawadaagista martida
5 Sababood oo Lagu Xaqiijiyo Shaqaalaynta Wakaaladda Suuqgeynta Dijital ah
Warbixin: 68% Agaasimeyaasha Guud ahaan MAYA JOOGIN BARNAAMIJ BULSHO